Tsoka Therapy Vagadziri - China tsoka Kurapa Vatengesi & Fekitori
Kugadzirisa Gel Cap
Reusable inotonhora kurapwa gel slippers, kukurumidza kupora echando kurapwa kweaneta uye nekuzvimba tsoka, tsoka dzinopisa, zororo kubva kuuropathy kurwadziwa kunokonzerwa nechirwere cheshuga uye chemotherapy.
Yakagadzirwa neyemachira ekutanga, edu anodzokororwa anotonhora anotsvedza ari nyore kushandisa uye kutonhora gel inosanganisirwa mune yakazara pasi uye izere pamusoro pemasilipu ekuenderera mberi kutonhora kwetsoka.
fekitori ndeye kuongororwa neBSCI, zvigadzirwa zvedu zvinoratidzwa neSGS, CE, FDA.
Type: Hot & Cold Mapake ane Soothing masokisi
Chinyorwa: NYLON + jira remvere
OEM / ODM: Hungu
Certification: CE FDA BSCE MSDS ISO9001 SVIRA
Usage: Kumba Kuchengeta Kupisa / kutonhora kurapwa
MOQ: 500 MAPIRI
Plantar chando kutonhora kurapa masokisi zvirinani kune maronda tsoka kurapwa kuzvimba arch kurwadziwa arthritis neuropathy chemo
Fekitori yedu inoongororwa neBSCI, zvigadzirwa zvedu zvinoratidzwa neSGS, CE, FDA.
Makore gumi Chiitiko cheOEM, ODM. Unogona kukupa mazano ehunyanzvi paCustomized color, logo, mapakeji, kubatsira kugadzira mhinduro yakanakisa yeiyo gel inotonhora kurongedza zvigadzirwa zvekurwadziwa.
Kune iwo anotonhora kurapwa masokisi, fekitori yedu ine saizi dzakasiyana uye sarudzo dzemavara, semuenzaniso ice bhuruu, tiffany bhuruu, pepuru, pink, girini, nhema .Tine tsika chena kana nhema nhema tambo ine velcro, akawanda mapakeji mazano kwauri kusarudza .